छाउपडीः सरकार वा सामाजिक संस्था, कसले छुने? नछुने? - Raamesh
जन-स्वास्थ्य र सरोकार
Home / लेख / विचार / छाउपडीः सरकार वा सामाजिक संस्था, कसले छुने? नछुने?
by Raamesh on 12:34 PM in लेख, विचार
प्राय सामाजिक संस्थाहरूसंग नजिकमा रहेका व्यक्तिहरू यसबारे अलिक मानविय दृष्टिकोण राख्‍दछन्। उनीहरूको विचारमा जनचेतना अभिवृद्धी गरेमा विस्तारै यो कूप्रथा हट्नेछ। र हाम्रालागि गर्वको कुरा, त्यसका लागि यो प्रथा कायम रहेका जिल्लाहरूमा सामाजिक संघसंस्थाहरूबाट निकै काम पनि भएका रहेछन्। गाउँका अगुवाहरूसंग मिलेर एफएम, स्थानीय पत्रपत्रिका तथा गाउँले भेलामार्फत यसका विरुद्ध निकै प्रचारप्रसार पनि गरिएको रहेछ।
हाम्रो इतिहासअनुसार चन्द्र शमसेरले दासप्रथा र सतिप्रथा हटाए। हुन त चन्द्र शमसेर जनताका बारेमा सोच्दथे र यो प्रथा हटाए भन्नेमा म रतिभर विश्वास गर्दिन। बेलायती उपनिवेश भारतमा विक्रम संवत १९१८ तिरै कानूनीरुपमा सति र दासप्रथा निषेध गरिएपछि बेलायतीको निरन्तर दबावले नेपालमा त्यसको साठी बर्षपछि मात्रै पहिला सतिप्रथा र त्यसपछि दासप्रथा उन्मुलन गरिएको हुनुपर्दछ। जे होस्, जसको दबावमा होस्, उन्मुलन भनिसकेपछि त्यसबेलाको सरकारले घोषणामात्र गरेन, यसलाई दण्डनीयसमेत बनायो। छिटपुट घटनालाई आँखा नचिम्लिनाले नै केही बर्षभित्र सतिप्रथा लोप नै भयो भने दासप्रथा केही स्थान र जातबिषेशलाई अपवाद राखेर हरायो। त्यस्तो चेतनास्तर न्यून भएको समाजले कसरी यति सजिलै ‘आस्था’ छाडिदिए त? पक्कै दण्ड-जरिवानाको डरले। यस्तै डरले नेपालमा जुवा खेलिन्न थियो। जुवा फुकुवा हुने दिन कुर्न जनताहरू बाध्य थिए। पहिलाको के कुरा, ट्राफिक प्रहरीले चलाएको मापसेविरुद्धको अभियानले ल्याएको परिवर्तन हाम्रो आँखाअगाडि छ। डर, जरिवाना, एक दिनको सास्तिः मादक पदार्थ खाएर वाहन चलाउनेलाई काम लाग्यो। नत्र के पहिला मापसे गरेर सवारी साधन चलाउन हुन्न भन्ने सबैलाई थाहा थिएन र? सरकारले मलाई दण्ड दिन्छ भन्ने डर निकै कुरामा कारगार हुन्छ। हाल संस्थागत र व्यक्तिगत घोटालाहरूले अर्बको अंक नाघेर खर्बतिर लागेको कारण दण्डहीनता हो भन्नेमा सायद कसैमा द्विविधा नहोला। अनि बाटामा हर्न बजाए ट्राफिकले हजार रुपैँया तिराउँछ भन्ने डरले हर्नको कर्कस आवाज कम भएको पनि सबैलाई थाहै छ। भ्रष्टाचारमा डर रहेन, हर्न बजाउनमा डर रह्यो। जनचेतनाले भ्रष्टाचार हटेन, दण्डको डरले हर्न हट्यो।
एनजिओहरूले नेपालमा निकै काम गरेका छन्। पंचायतयूगको अवसानपछि गैह्रसरकारी सामाजिक संस्थाहरू नेपालमा गजबले बढे। पहिला सुनिने केही सामाजिक संस्थाहरू स्वास्थ्य र शिक्षाको आवरणमा अन्य काम पनि गर्थे भन्नेमा विमति नहोला। तर विस्तारै सामाजिक संस्थाको काममा विकास पर्न छाड्यो र चेतनाअभिवृद्धी प्रमुख हुन थाल्यो। सायद कति लगानी भयो र के कति प्रतिफल पाइयो भन्ने कुरा ‘विकास’ मा देखिने भयो। हिसाब गर्न सकिने भयो। तर यो ‘जनचेतना अभिवृद्धी’ त कसरी नाप्‍नु? के ले नाप्‍नु? यो वैश्ययूगमा पनि हिसाब गर्न नसकिने यो ‘अमूर्त’ संसारमा किन प्रायस गैह्रसरकारी संस्था लागिरहेका छन् त? अंदाज सरल छ तर किटानी गाह्रो हुनेरहेछ। अझ आफूइतर विचारलाई 'सिमा नाघियो' वा 'तँ चुप लाग्' भन्ने हैसियतमा पुगेको वाकस्वतन्त्रताको यूगमा।
Tags # लेख # विचार
By Raamesh at 12:34 PM
Durga Pangeni July 22, 2017 at 12:58 PM
छाउपडी को विषय मात्र नभएर डाक्टर सापले हाम्रो समसामयीक परिवेश,दोहोरीई रहने घटनाक्रम हरु र तत सम्बन्धमा सर्वेच्च निकायमा बोल्न पाउने हरुको भाषा र उनिहरुको तरीकालाई समेत गम्भीर रुपमा उठाउनुभएछ । हाम्रो संसद छाउपडीको विषयमा कति जानकार छ र सदनमा कुरा उठाउने सांसद सदस्यले बोल्ने विषयमा कति अध्यन गरेपछी त्यहा कुरा उठाउने समय पाउनु पर्ने हो भन्ने कुरा पनि चासोकै बिषय बनेर रह्यो ! आरजु राणाकै एनजीओ ले समेत छाउपडीको क्षेत्रमा डोनेसन गर्छ रे उनको अनभिज्ञताले झन लाजमर्नु बनायो ।
Raamesh July 23, 2017 at 7:06 PM
मन लागेका कुरा लेखेको हुँ, मन पराइदिनु भएकामा धन्यवाद!
Unknown July 22, 2017 at 2:22 PM
डाक्टर साब को यो लेख ले समाज लाई लज्जित नै बनाउने गरी टा उके भई खाएका नेता हरु लाई झटारो हान्ने काम गर्नु भएको छ।
तर निर्लज्ज हरु लाई के थाहा यस्को दिर्घकालीन असर ? एक्काइसौ सताब्दी का हामी नेपाली अझै जङली समाज मा छौ मानब अधिकार को ठुलो कुरा गरेर डलर को खेती गर्दै मा हाम्रो देश को छाउगोठ हट्ने छैन बरु फेरी फेरी ब्युताएर डलर ओसार्ने काम मात्र हुन्छ। सिक्नु पर्ने नेता हरु ले हो एक आफ्नो काम मा दिन रात नभनी खटी रहेका डाक्टर ले सामाजिक क्रान्ती को अगुवा लिने हो भने उन्ले गर्ने सल्य कृया को कैची तिमी हरु समाइ दिनु , तिमी हरु को काम डाक्टर साब लाई जिम्मा लगाइदिनु , धन्यवाद डाक्टर साब यो गतिलो झटारो को लागी, तपाईं मा उब्जेको सामाजिक कुरिती को रिश स्पस्ट देख्दै छु, आशा गरुम सामाजिक अभीयन्ता हरु ले पनि चाडै देखुन .
Raamesh July 23, 2017 at 7:07 PM
धन्यवाद! सरकार र नेतृत्व सुध्रियोस् भन्ने चाहना हो, आम नेपाली सरह।
G Gaire July 22, 2017 at 3:58 PM
नेपाली समाजमा रहेका यस्ता कुरितिहरुले सवै नेपालिहरुलाई लज्जित वनाउछ। यो देशमा नितिनियम र कानुनको अभाव छैन ।अभाव छ त मात्र इच्छाशक्तिको । सामाजिक संस्थाहरुले लठ्ठि लगाउन सक्दैनन् र यो उनिहरुको दायराभित्र पनि पर्दैन । उनिहरु वोल्छन् जसलाई जनचेतना भन्ने गरिन्छ तर त्यो परियोजनाको वजेट छन्जेल । अभियान वनाएर काम गर्नु पर्नेमा मात्र परियोजना वन्छन् र यतिउति परिणाम देखाउदै सकिन्छन् । सरकारी सम्यन्त्र निदाएको छ र ठुलो आवाज़ सुन्यो भने निद्रावाट विउजिएर १, २ दिन लठ्ठि देखाउछ । आवाज़ कम हुदै जान्छ फेरि निदाउछ । हजुरहरु जस्तो अभियान्ताहरुको निरन्तर आवाज़ सुनिनुपर्छ जसले सरकार लाई ज़िम्मेवार वनाइराखोस् लठ्ठि चलाउन र समाजको मानसिकता परिवर्तन गर्न काम गर्ने अभियान संचालन होउन् परियोजना होइन । धन्यवाद लेखको लागि डा साल लाइ ।
Raamesh July 23, 2017 at 7:08 PM
धन्यवाद है! म अभियन्ता त हैन, आक्रोस पोख्ने साधन पाएपछि यसको सदुपयोग गर्दै मात्र।
Unknown July 25, 2017 at 11:57 PM
क्या गजवको लेख ।मलाई पनि आमाले मुडामा पर बसेर नुन तेल अड्कली दिनु हुन्थ्यो ।भातको माड तार्न सक्दैन भनेर ठिक्क मात्र पानी हाल्न औलाको ईसाराले सिकाउनु हुन्थ्यो
Tweets by RaameshKoirala
MCC विचार (2) Memoir (2) गन्थन (1) पुस्तक अन्त्य (1) पुस्तक अंश (3) प्रतिवेदन (1) भ्रमण अनुभूति (1) मनोवाद (1) लेख (29) विचार (28) विमानस्थल (5) सुरुवात (1)